မရှိလို့ မလှူတယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဒီရက်ပိုင်း အလှူတွေဆက်တိုက် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကော်နီ – Suehninsi
အသံပါဝါအားကောင်းကောင်း၊ တင်ဆက်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိသူကော်နီကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားတဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့သူပါ။ ခေတ်နဲ့အညီ ပရိသတ်အတွက် သီချင်းအသစ်တွေ ဆက်တိုက်ချပြဖို့
ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး ။ ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေပေးလေ့ရှိပြီး ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ မကော်တစ်ယောက် အလှူအတန်းမပြတ်ပြုလုပ်ဖြစ်နေသလို ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဝေယာဝစ္စကုသိုလ်ယူရင်း ကိုဗစ်ကာလကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါတယ်။ မနေ့ကလည်း ဂီတမောင်နှမတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အပြန်မှာ အလှူလေးတစ်ခုရအောင် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလာပါတယ်။ ” မနေ့က, မောင်နှမတွေ , တွေ့ဆုံကြတယ်… အပြန်,မင်းဓမ္မလမ်းက,
သစ်ပင်တွေဝယ်, ကိုယ့်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူခဲ့ပြီ, ဒီရက်ထဲ, မရှိမလှူမဖြစ်ရလေအောင်, အလှူ ရေစက်လက်နဲ့ မကွာ လှူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး သူလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အလှူလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်း ကိုဗစ်ကာလကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့အပြင် မရှိလို့မလှူ မလှူလို့မရှိ မဖြစ်ရလေအောင် အလှူဒါနပြုနေတဲ့ မကော်ကတော့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်လေးပါပဲနော်။
အသံပါဝါအားကောငျးကောငျး၊ တငျဆကျမှုကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးတှကေို သီဆိုလရှေိ့သူကျောနီကတော့ ခတျေအဆကျဆကျ ပရိသတျပါးစပျဖြားမှာရပေနျးစားတဲ့ သီခငျြးတှကေို သီဆိုခဲ့သူပါ။ ခတျေနဲ့အညီ ပရိသတျအတှကျ သီခငျြးအသဈတှေ ဆကျတိုကျခပြွဖို့
ကွိုးစားနသေူတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး ။ ခဈြခငျရတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ တနတေ့ာအကွောငျးအရာလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျမှာ မြှဝပေေးလရှေိ့ပွီး ဒီရကျပိုငျးမှာတော့ မကျောတဈယောကျ အလှူအတနျးမပွတျပွုလုပျဖွဈနသေလို ဘုနျးကွီးကြောငျး
ဝယောဝစ်စကုသိုလျယူရငျး ကိုဗဈကာလကို ဖွတျသနျးလကျြရှိပါတယျ။ မနကေ့လညျး ဂီတမောငျနှမတှနေဲ့ တှဆေုံ့ပွီး အပွနျမှာ အလှူလေးတဈခုရအောငျ လုပျဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးကို မြှဝလောပါတယျ။ ” မနကေ့, မောငျနှမတှေ , တှဆေုံ့ကွတယျ… အပွနျ,မငျးဓမ်မလမျးက,
သဈပငျတှဝေယျ, ကိုယျ့ဘုနျးကွီးကြောငျးကိုလှူခဲ့ပွီ, ဒီရကျထဲ, မရှိမလှူမဖွဈရလအေောငျ, အလှူ ရစေကျလကျနဲ့ မကှာ လှူဖွဈနခေဲ့ပါတယျ” ဆိုပွီး သူလုပျဖွဈခဲ့တဲ့အလှူလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…. ကုသိုလျကောငျးမှုတှလေုပျရငျး ကိုဗဈကာလကို ဖွတျသနျးနတေဲ့အပွငျ မရှိလို့မလှူ မလှူလို့မရှိ မဖွဈရလအေောငျ အလှူဒါနပွုနတေဲ့ မကျောကတော့ မှနျမွတျတဲ့စိတျထားပိုငျရှငျလေးပါပဲနျော။
Source : Tun Connie | Reference & Credit : Cele Gabar
ကျောင်းတက်ဖို့တောင် ပိုက်ဆံမရှိလို့ နိုက်ကလပ်မှာ ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝအခြေအနေကို ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ဇာဇာထက်